ပြည်ပသို့ ကျွဲ၊ နွားတင်ပို့မှု အခက်အခဲများဖြေရှင်းရန် ကျွဲနွား တင်ပို့သူများအသင်း ဖွဲ့စည်း - Yangon Media Group
ပြည်ပသို့ ကျွဲ၊ နွားတင်ပို့မှု အခက်အခဲများဖြေရှင်းရန် ကျွဲနွား တင်ပို့သူများအသင်း ဖွဲ့စည်း
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျွဲ၊ နွား တင်ပို့သူများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများ စုပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်မည့် တိုင်းဒေသကြီး ကျွဲ၊ နွားတင်ပို့သူများအသင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက် က တိုင်းဒေသကြီး မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ”ပြည်ပကို ကျွဲ၊ နွားတင်ပို့တဲ့အခါမှာ၊ ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရတယ်။ ဒါကို စုပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်အောင် ဈေးကွက်မှာ သွားပြုံနေတာမျိုးတွေကို စုပေါင်းပြီးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် အသင်းဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်။ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအရတင်ပို့တာ။ ဒီအသင်းက ကျွဲ၊ နွားကို တောင်သူဆီကနေ ဝယ်ပြီးတော့ တင်ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးစုပြီး စဖွဲ့တာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်ထင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွဲ၊ နွားများတင်ပို့ရာတွင် ဈေးနှုန်းပုံမှန်ရရှိမှုမရှိခြင်း၊ တရားဝင် တင်ပို့ခြင်းမဟုတ်သဖြင့် ကြားခံလုပ်ဆောင်ပေးသူများကြောင့် အဆင်မပြေခြင်း၊ လမ်းခရီးတွင် မလိုအပ်သောအခကြေးငွေများကို ပေးဆောင် နေရခြင်း၊ ပေးဆောင်ခြင်းမရှိလျှင် လက်နက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရခြင်းနှင့် အခြားသောအခက်အခဲများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ယခုကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အသင်းဖွဲ့စည်းရာတွင် ပြည်ပသို့ ကျွဲ၊နွားတင်ပို့နေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းရှင် (၂၄) ဦးဖြင့် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတို့တွင် ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားရန် စီစဉ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပသို့ ကျွဲ၊ နွားအရှင်တင်ပို့မှုကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ စုစုပေါင်းကောင်ရေသုံးသိန်းကျော် တရားဝင်တင်ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
'ကိုယ်စောင့်နတ်' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအား ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ ရုံတင်ပြသမည်
''တစ်ခုခု အခက်အခဲကြုံလာရင် ချက်ချင်းမြန်မြန် ဖြေရှင်းတာကောင်းတယ်။ မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင် သူ??
အရက်မှန်သမျှ သောက်သုံးလျှင် ဘေးဥပဒ် မကင်းဟုဆို
အောင်ဝင်းဇော်ကို မသိဟု တစ်လမ်းတည်းနေ တရားခံပြသက်သေ တစ်ဦးက ထွက်ဆို
လူငယ်များ၏ အရည်အသွေးကို လျှော့မတွက်ရန် ဆောက်ဂိတ်သတိပေး၊ မိမိနှင့် အိုဒွိုင်းတို့အတွက် စတ??
ရှီးယား နောက်ပိုင်း ပြစ်ဒဏ်အများဆုံး ပြုလုပ်ခံရသူ နေမာဖြစ်လာ၊ ပင်နယ်တီ ရခဲ့သင့်ကြောင်း တိ??
တောင်သူများ သီးနှံအာမခံ ထားရှိနိုင်ရေး အတွက် သုတေသနပြု စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မကွေးတို??